जोखिम मोलेर ढुङ्गामा धन खोज्दै रुकुमेली – Sadarline
२६ चैत, नेपालगन्ज :प्रदेश नं. ६ को बिकट जिल्लाको रुपमा चिनिने पश्चिम रुकुम प्राकृतिक र सांस्कृतिक रुपमा आफैमा सम्पन्न जिल्लाको रुपमा चिनिदै आएको छ । पश्चिम रुकुम चौरजहारी नगरपालीका वडा नं. ९ मा अबस्थित ढुङ्गे खानि संभबत नेपालको पहिलो ढुङ्गे खानीको रुपमा परिचित रहेको छ । रुकुम जिल्लाको यस ढुङ्गे खानिबाट ढुङ्गाहरु घरको छाना छाउन र मार्बलको रुपमा समेत प्रयोग गर्ने गरेको केशर बहादुर मल्लले बताए ।
यस ढुङ्गे खानीबाट नेपालका बिभिन्न जिल्लाहरु कास्की, काठमाण्डौँ, लगाएत छिमेकी जिल्लाहरुमा ढुङ्गाह्ररु निर्यात हुने गरेको मल्लले बताए । यहाँ ढुङ्गाहरु बिभिन्न खालका रहेकाले ३० देखी ५५ रुपैयँ सम्म बिक्रि बितरण गर्ने गरेको पनि उनले बताए । यहाँ ढुङ्गा उत्खननमा बिभिन्न्न समस्याहरु रहेता पनि समस्याका बाबजुत पनि उत्खनन गर्ने गरेको उनले बताए । पहाडको बिचमा रहेको उक्त खानीमा बेला बेलामा पहिरो आउने हुदा त्याहा आएको माटो फाल्न नै समय लाग्ने हुदा समस्या भएको समेत उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार दैनिक एक हजार जति कमाई हुने हुदा परिवार पाल्न समस्या नरहेको हुदा स्थानिय सरकारको केहि सकारात्मक कार्य गरेको खण्डमा अझ सहज हुनेमा आफुहरु बिश्वस्त रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले यस ढुङ्गा खानीमा काम गर्न लागेको १० बर्ष भएको समेत उल्लेख गरे । ढुङ्गा खानीमा काम गर्न त्रासपुर्ण रहेता पनि बाहिर एक जना हेरालु राखेर काम गर्दै आएका अनुभब हामी संग बताए । बेला बेलामा माथीबाट पहिरो आउने हुदा भाग्दै काम गर्ने गरेको उनले बताए । काम गर्नका लागी धेरै चुनैती समेत रहेको बताए ।
यस्तै चौरजहारी नगरपालीकाका मेयर बिशाल शर्माले चौरजहारी नगर भित्र रहेका बिभिन्न खानी र पर्यटकीय स्थलको सं्क्षणका लागी आफुहरु लागी रहेको बताए । अहिले हामीहरु बिकास निर्माण कार्यममा लागेको र खानी उत्खनन कार्यलाई पनि तिब्रता दिदै आएको बताए । कामदारको सुरक्षा र उत्खनन स्थलको संरक्षणका लागी नगरपालिकाले योजना बनाइ सकेको हु्दा अब त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटो बाकी रहेको बताए ।
हिजोमात्र खानीमाथी वाट आएको ढुंगालागेर रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नं ९ गुर्तालगाउँका ४३ वर्षिय ईन्द्र वहादुर मल्लको अल्पआयुमा मृत्यु भयो । शक्त घाईते मल्लको चौरजहारी अस्पतालमा उपचार संभव नभएपछि नेपालगञ्ज लिने क्रममा विच वाटो सल्लीवजारमा निधन भयो । यस ठाउमा अहिलेसम्म कुनै पनि मानबिय घटना नभएको र दुई जना ब्यक्तिहरुलाई माथीबाट आएको ढ्ङ्गा लागेर मृत्यु भएको स्थानियहरुले बताएका छन ।
सदरलाइनडटकम २६ चैत, नेपालगन्ज : खजुरा गाउँपालिकाको सोमबारदेखि शुरु दोस्रो गाउँसभाले विभिन्न ऐन तथा कार्यविधि पारित गरेको छ । गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिको अध्यक्षतामा बसेको गाउँसभाले खजुरा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन–२०७४, गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, खजुरा गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक […]
३ पुष २०७४, सोमबार १४:२४